Mankaiza izao tontolo izao? – Webinar. – JucelinoLuz
Manantena izahay fa ho salama tsara sy milamina ianao amin’ny fiandohan’ny lohataona na dia eo aza ireo telo volana voalohany amin’ny taona 2022 izay tena nitaky ezaka be ho an’izao tontolo izao. Ny ady ao Okraina dia mahasosotra sy miantraika amin’ny ampahany betsaka amin’ny mponin’ny Tany izay matahotra ny firongatry ny ady lehibe fahatelo. Ary avy eo dia tonga ny firodanan’ny toekarena izay indrisy fa nanomboka tamin’ny volana martsa, araka ny nambaran’i Jucelino. Mbola tsy nisy toy izany ny tahan’ny vinavinan’ny tsy fidiana ho an’ny fifidianana filoham-pirenena tany Frantsa ary nahatratra ny haavony tsy nisy toy izany ny fandotoana solika tany amin’ny faritra maro maneran-tany. Ny fampahalalam-baovao dia mamerina sy mamerina ny zavatra tsy mety ary miteraka fanontaniana sy tahotra bebe kokoa izay manafika ny trano. Fa ho aiza isika? mahagaga izao tontolo izao.
Ianareo izay manaraka ny faminanian’i Jucelino dia mahafantatra fa amin’ity indray mitoraka ity dia feno zava-mitranga manova sy mampanahirana, saingy tsy voasoratra amin’ny vato izany, satria ny angovo dia mihetsika haingana dia haingana. Izany no antony maha-zava-dehibe anay ny manolotra anareo ity webinar vaovao ity mba hanananareo vaovao “vaovao” izay nentiny niverina tamin’ny alina nitsidihany ny hoavin’ny tany.
Na dia efa nahita sy nanohy nahita zava-nitranga vaovao mety hitranga aza izy, dia fantatr’i Jucelino fa tsy misy azo antoka na oviana na oviana ary ny fanantenana sy ny finoana dia mpiara-miombon’antoka roa tena ilaina izay niaraka taminy nandritra ny 52 taona nanaovana vinavina.
Ity webinar ity dia tsy mba hiteraka tahotra fanampiny, fa hanome fahalalana bebe kokoa mba hiandrasana sy hiomanana ho afaka hihetsika any ambony sy hahazo ny fiarovana anatiny.
Mihoatra noho ny hatramin’izay, ny vondronam-bavaka, ny fiaraha-mientan’ny fitiavana ary ny fivorian’ny fanahy tsara tarehy izay mivory hisaintsaina dia manampy amin’ny fanovana ny fandaharam-potoana. Raha toa ka efa voasoratra anarana ao amin’ny JDL ianao dia aoka isika hiray fo amin’ny Zoma 1 Aprily mba hampamirapiratra ny fitiavam-pitiavana izay entintsika ao anatintsika sy hampiely ny tara-pahazavany amin’izao tontolo izao izay matahotra. Ary raha mbola tsy voasoratra anarana ianao ka miantso anao ny fonao dia misoratra anarana amin’ity faribolan’ny Vavaka Fahazavana ity.
Ny fitiavana mandresy ny tahotra.